Flyers Rights dia mamoaka ny drafitry ny fitsangatsanganana ara-tsosialy sy ny fikorontanan'ny rivotra
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Flyers Rights dia mamoaka ny drafitry ny fitsangatsanganana ara-tsosialy sy ny fikorontanan'ny rivotra
Ny tanjon'ny Drafitra sosialy sy ny fikorontanan-tsaina dia ny fampitomboana ny fahatokisan'ny mpandeha ny fiarovana ny dia an-habakabaka
Ny fahitana lavitra ny fiaraha-monina lavitra amin'ny fiaramanidina dia azo tratrarina ary hampihena ny fiparitahan'ny COVID-19
Hatreto dia nomena fanampiana an-tariby fotsiny ny zotram-pitaterana an'habakabaka amin'ny olan'ny fitakian'ny mpandeha ketraka
Ny drafitra FlyersRights.org dia mitaky zotram-piaramanidina hamerana ny anton'isan'ny mpandeha hatramin'ny 50% na 65%
FlyersRights.org dia namoaka ny drafitry ny fizahan-tany ara-tsosialy ho an'ny Air Travel ho valin'ny didin'i Executive Biden izay niantso ny masoivoho federaly hijery sy hampihatra ny fepetra fanalefahana COVID-19 fanampiny amin'ny dia an-dranomasina.
Paul Hudson, filohan'ny FlyersRights.org, nanazava. “Ny tanjon'ny Drafitra fanalavirana sosialy sy fikorontanana dia ny fampitomboana ny fahatokisan'ny mpandeha ny fiarovana ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fiarovana ny dia an-dranomasina. Ny fahitana lavitra ny fiaraha-monina lavitra amin'ny fiaramanidina dia azo tratrarina ary hampihena ny fiparitahan'ny COVID-19. Ny nangatahan'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia nomena fotsiny ny fanampiana ny olan'ny fitakiana mpandeha ketraka. ”
The FlyersRights.org drafitra dia mitaky zotram-piaramanidina hamerana ny anton'isan'ny mpandeha hatramin'ny 50% na 65%. Ny governemanta federaly dia hividy seza maromaro, ary hitazona azy ireo tsy hipetraka, mba hahafahan'ny kaompaniam-piaramanidina miasa amin'ny tombony ahazoana mpandeha 80%. Ho setrin'izany, ny governemanta federaly dia mahazo toerana isan-jato isan-jato amin'ny ho avy ho an'ny mpiasan'ny governemanta federaly. Nandritra ny areti-mandringana, ny zotram-pitaterana an'habakabaka dia mitazona ny anton'isan'ny mpandeha manodidina ny 46% ka hatramin'ny 52% raha mampitombo ny isan'ny sidina natolotra, hoy ny Bureau of Statistics Statistics.
"Mpandeha maro no mahita ireo tantara mampihoron-koditra amin'ny sidina feno ary manapa-kevitra ny tsy hanao vivery ny lazany," hoy i Paul Hudson nanamarika. “Raha azo antoka ny mpandeha fa tsy mihoatra ny 50% na 65% ny sidina dia betsaka ny olona mandeha. Ny vidin'ny drafitra dia mitovy amin'ny vidin'ny zotram-piaramanidina telo amin'ny taona 2020-2021 fa kosa ahazoana tombony antonony ho an'ireo zotram-piaramanidina fa tsy fatiantoka lehibe. ”
Ny governemanta federaly dia tsy nandany fepetra fanalefahana fiaramanidina COVID-19 mihoatra ny lalàna mifehy ny sarontava, ary zotram-piaramanidina iray ihany no manana politika tsy hametraka ny mpandeha amin'ny seza afovoany. Mandritra izany fotoana izany, ny CDC dia mbola manome soso-kevitra amin'ny fanoherana ny rivotra raha tsy ilaina izany.
Ny hofan-trano fialan-tsasatra Hawaii dia nidina 34.3%
Millennial indroa mety hisafidy fonosana fialan-tsasatra vahiny noho ny Baby Boomers
33 minitra lasa izay